Uyenza njani i-FM Transmitter Circuit Cover 3MM-5KM? -CZH / Fmuser Fm Transmitter China Umxhasi Qhagamshelana: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » iindaba » Uyenza njani i-FM Transmitter Circuit Cover 3KM-5KM?
Uyenza njani i-FM Transmitter Circuit Cover 3KM-5KM?
Umhla: 2017-05-19 / udidi: iindaba
Iintshatsheli ze-FMUSER FM zisetyenziswe kwihlabathi lonke kunxibelelwano. Ukulula kokuyakha isekethe ye-FM kuyenze yathandwa kakhulu phakathi kwezinye iindlela zokuguqula imeko. Namhlanje ndize nesekethe yokudluliselwa kwi-FM enoluhlu olumalunga ne-3 Km phantse. Umzobo wesekethe wawubanzi banzi kwaye andikwazi ukufanela kweli phepha lewebhu. Cofa kuyo ukuze ubone umfanekiso omkhulu wesisombululo. Masingene kwinxalenye yokusebenza kwesi siphaluka.
UNOKUSEBENZA NJANI ISIQINISEKISO SESIQENDULO SESI-FMUSER:
Kwakukho izinto ezininzi kunye neziqendu ezikule setyhula ngoko ke ndiya kuyigcina inkcazo ilula njengoko kunokwenzeka. Olu luhlobo olusulungekileyo lwe-FM olusisigxina esine-frequency ezinzileyo eziswe yi-oscillator eguqulweyo, eneneni ii-oscillator ezimbini ezakhiwe ngeenxa zonke kwi-Q2 kunye ne-Q3 isebenza malunga ne-50MHz kwi-anti-phase. Iziphumo zithathwa kubaqokeleli bobabini, apho iingqokelela ze-oscillator zimbini zidibanisa ukwenza umqondiso we-100MHz. Oku kuya kubonelela ngokuzinza okukhulu kunee-oscillators eziqhelekileyo eziphelileyo.
Ukumodareyitha kwenziwa ngendlela ye-varicap D1 / D2 kunye ne-capacitor eguquguqukayo ye-C8. Ngokutshintsha i-voltage ebuyayo ekhethiweyo kwi-varicap (ngokomqondiso wokufaka) utshintsha amandla ayo ngokokuphindaphindiweyo kwesekethe yetanki. Oku kukhokelela kwimodyuli eguquguqukayo yophawu lokungenisa phantse. Iziphumo zokuphuma kwenqanaba le-oscillator / yemodareyitha kudluliselwa kudidi lwesigaba somqhubi esakhiweyo usebenzisa i-transistor Q4. Isibonakaliso sokuphuma komelezwa ngakumbi ngokondla ngaphakathi kwiklasi yamandla ombane okwakha malunga ne-Q5.
Ngoku fikisa umqondiso wokukhupha ukusuka kuHlelo C ukuya kwiifilitha ezisezantsi ezenziwe ngochungechunge lweeCapacitors kunye nee-Inductors. Oku kwenzelwa ukufezekisa i-harmonics spurs kwisiphumo ngaphambi kokuyondla kwi-antenna. Ndongeze isalathiso se-D3 esibonisa ukuba uyadlulisela kwaye yonke into isebenza kakuhle. Ukuba i-LED ayikhanyisi, into ayilunganga ngesikimu. Ingxaki ihlala ivela kwinxalenye ye-oscillator (nje ngecebo). Kananjalo ndakwazi ukususa phantse zonke ii-capacitors eziguquguqukayo kodwa ezona zilungayo, kuba ischemic yentsusa yayinee-capacitors ezininzi ezahlukeneyo kwaye kunzima ukuzidibanisa zonke.
UMGAQO-NKQUBO UTSHINTSHO KWE-CIRCUIT ye-FM:
Amandla esiphumo sokuphuma kolujikelezo lwe-FM ngu-2.5W. Kwi-2.5W ye-FM ekwaziyo ukugubungela umgama oyi-5 - 7 Km ngomgca wokubona. Kwimeko elungileyo imeko inokufikelela kwi-10km phantse. Ke ndiyakholelwa ukuba iya kuba ilungile into yokuba isekethe igubungele uluhlu lwe-3 Km nangaphantsi kweemeko ezilungileyo zangaphandle okanye ezimbi zangaphandle.
Esi siphaluka sasilungiselelwe iinkqubo zokufumana uMyalezo kwiYurophu yaseYurophu nangona zizakusebenza eMelika ngokunjalo, andiqinisekanga ukuba umgangatho womsindo uza kuhlala unjalo. Oko kuvela kwinto yokuba ndisebenzise u-50us preemphasis ongumgangatho waseYurophu kwaye i-USA isebenza nge-75us preemphasis.
Xa usenza le setyhula, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uthathele ingqalelo kwi-PCB. Kubaluleke kakhulu ukusebenzisa iplanethi yomhlaba esikhundleni sikaloliwe womhlaba xa ushukuma inkqubo. Oku kwandisa indawo yomhlaba kunye nokuqina. Unokwakha kwakhona i-balun ngaphambi komgca wokutya we-antenna ngokudibanisa ii-3 okanye ii-4 iijika zentambo e-coaxial ubude obuziisentimitha ezingama-21. Ngenxa yoko oku kuya kudala umngxunya ongapheliyo weentsimi zombane ezihamba kwiqokobhe langaphandle lekhebula, kwaye uthintele ukuwenza ube yinxalenye ye-eriyali, engathandekiyo.
Ungaze uqalise ukuhambisa ngaphandle komthwalo.
Ukuba awuyidibenanga i-eriyali faka nje isibambisi somthwalo osisithambisi esingu-50ohm nge-2W (ikhabhoni, hayi inxeba elikwi-wire) kwaye uvavanye isekethe yakho.
Ndiyathemba ukuba nonke niyayithanda le projekthi, zama le nto kwaye nithumele iziphumo. Ngemibuzo nceda usebenzise ibhokisi yezimvo engezantsi, ndingavuya ukuyiphendula. Ukwenza uyolo lwe-DIY
Ukuba ufuna ukuthenga i fm ukuhambisa kunye nokwakha isikhululo sikanomathotholo, wamkelekile ukuqhagamshelana nam. Injineli yethu iya kunika isisombululo.
«Ngaphambili: Uyiseta njani i-Encoder yakho yoSasazo lwe-IPTV yoSasazo?
Iplatifomu yevidiyo ye-Intanethi ye-Intanethi ethandwayo yokusasazwa okubukhoma: i-UStream, DaCast, i-Livestream, i-Kaltura, i-Ooyala, kunye ne-Brightcove :Okulandelayo "